Namuhla akuseyona Inkathi YoMusa, noma inkathi yesihe, kodwa Yinkathi YoMbuso lapho abantu bakaNkulunkulu bevezwa khona, inkathi lapho uNkulunkulu enza khona izinto ngqo ngobuNkulunkulu. Ngakho-ke, kulesi sahluko samazwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhola labo abamukela amazwi Akhe ubangenisa endaweni yakamoya. Esigatshaneni sokuqala, Yena wenza la malungiselelo ngaphambi kwakho konke, kuthi uma umuntu eba nolwazi lwamazwi kaNkulunkulu, baholwe yisivini ukufinyelela esithelweni, bese eqonda ngokuphelele lokho uNkulunkulu afuna ukukuzuza kubantu Bakhe. Phambilini, abantu babevivinywa ngesihloko esithi “abenzi bomsebenzi,” kanti namuhla, emva kokuba sebeke bafakwa ekulingweni, kungukuqala ngokusemthethweni kokuqeqeshwa kwabo. Phezu kwalokho, abantu kumele babe nolwazi olukhulu lomsebenzi kaNkulunkulu olubhekiswe esesekelweni samazwi adlule, futhi kumele kubhekwe amazwi kanye nomuntu, uMoya kanye nomuntu, kubhekwe njengokuphelele okungehlukaniswe—okunjengomlomo owodwa, inhliziyo eyodwa, isenzo esisodwa, kanye nomthombo owodwa. Isidingo lesi singesiphakeme kakhulu ezidingweni uNkulunkulu azenzele umuntu kusukela ekudalweni kwezinto. Kulokhu kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa ingxenye yemizamo Yakhe kubantu Bakhe, ukuthi ufuna ukukhombisa kubo izimpawu kanye nemimangaliso, futhi, okubaluleke kakhulu, ufuna ukwenza bonke abantu bathobele ukuphelela komsebenzi kaNkulunkulu kanye nokwamazwi. Kolunye uhlangothi, uNkulunkulu Uqobo uyabugcina ubufakazi Bakhe, kanti kolunye, wenze izidingo zabantu Bakhe, futhi ukhiphile ngaphambilini Imithetho yokuphatha kukaNkulunkulu wayikhiphela izixuku: Ngakho, Njengoba nibizwa ngabantu Bami, izinto azisenjengoba zazinjalo; kumele nilalele futhi nihloniphe izinto ezishiwo uMoya Wami, nilandele eduze umsebenzi Wami, ningehlukanise uMoya Wami nenyama Yami, ngoba Simunye ngokwendalo, kasehlukene neze. Kulokhu, ngukunqanda abantu ukuba bangamlibali uNkulunkulu osenyameni, kugcizelela futhi ekuthini “ngoba Simunye ngokwendalo, kasehlukene neze”; ngoba lokho kulibala kungukungaphumeleli, lokhu kukhona ohlwini lweMithetho yokuphatha kukaNkulunkulu. Okulandelayo, uNkulunkulu uyabazisa abantu ngemiphumela yokwedelela Imithetho yokuphatha Kwakhe, ngaphandle kokufihla lutho, lapho ethi, “uzolahlekelwa, aphethe ngokuphuza enkomishini yakhe ebabayo.” Ngenxa yokuthi abantu bantekenteke, emva kokuzwa la mazwi ababe besakwazi kwenza lutho ngaphandle kokumane bangabe besamethemba uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, ngokuthi “inkomishi ebabayo” yanele ukwenza abantu bacabange ngokujula isikhashana. Abantu bakuhumusha ngezindlela eziningi lokhu “kwenkomishi ebabayo” uNkulunkulu akhuluma ngakho: ukwahlulelwa ngamazwi noma ukuxoshwa embusweni, noma ukuhlaliswa wedwa isikhathi esithile, noma ukwenza inyama yonakaliswe nguSathane ilawulwe yimimoya emibi, noma ukushiywa nguMoya kaNkulunkulu, noma ukumiswa kwenyama bese ilahlwa eHayidese. Lezi zincazelo ziyilokho ubuchopho bomuntu obukuqondayo, ngalokho abantu emiqondweni yabo, abakwazi ukudlulela ngaleya kwazo. Kanti imicabango kaNkulunkulu kayifani neyomuntu; okusho ukuthi, “inkomishi ebabayo” ayibhekisile kulokhu okungenhla, kodwa ibhekise kubo ubungako bolwazi lwabantu ngoNkulunkulu emva kokwamukela izenzo zikaNkulunkulu. Ukukubeka ngendlela ecacile nje lokhu, uma umuntu ehlukanisa uMoya kaNkulunkulu namazwi Akhe ngokungemthetho, noma ehlukanisa amazwi nomuntu, noma uMoya nenyama ayigqokile Yena Uqobo, lo muntu akukhona kuphela ukuthi akakwazi ukumazi uNkulunkulu emithethweni yokuphatha kukaNkulunkulu, kodwa unokumsola uNkulunkulu—emva kwalokho abe ebeba yimpumputhe kuyo yonke indawo. Akukhona ukuthi kungathi abantu emqondweni wabo bahlukaniswe ngokuqondile; nokho, bayawela kancane kancane ekuthini basolwe nguNkulunkulu—okungukuthi, behlela ekubhujisweni, angabibikho okwazi ukusebenzisana nabo, kube sengathi bangenwe yimimoya emibi, futhi kube sengathi bayimpukane engenakhanda, banokuzishayisa kuzo zonke izinto lapho beya khona. Nakuba kukhona lokhu, abakwazi ukushiya. Ezinhliziyweni zabo, izinto zilukhuni ngokungachazeki, kungathi kunenkathazo engakhulumeki ezinhliziyweni—nakuba kunjalo abakwazi ukuvula imilomo yabo, bachitha futhi usuku lonke beziphuphela, bengakwazi ukumuzwa ngemizwa uNkulunkulu. Yingaphansi kwalezi zimo lapho Imithetho yokuphatha kukaNkulunkulu ibahlokoloza khona, ukuze bangabi naso isibindi sokushiya ibandla nakuba injabulo bengenayo—lokhu yikho okubizwa “ngokuhlaseleka kwangaphakathi nangaphandle,” kulukhuni ngokwesabisayo futhi kubantu ukuthi babekezele. Lokhu okushiwo lapha kwehluke kakhulu ekuqondeni kwabantu—kanti kungoba, kulezi zimo, bayakwazi ukufunda uNkulunkulu, okwenzeka uma uNkulunkulu ebafulathela, okubaluleke kakhulu futhi ukuthi, njengabangakholwa, abakwazi nhlobo ukumuzwa ngemizwa uNkulunkulu. UNkulunkulu akabasindisi ngokuqondile abantu abanjalo; ngenkathi inkomishi yabo ebabayo ithululwa, kuba yiso isikhathi lapho izinsuku zokugcina zabo zifika khona. Kodwa kulesi sikhathi samanje, basayifuna intando kaNkulunkulu, befisa ukuyijabulela ngokwengeziwe kancane—kodwa isikhathi asisafani nesidlule, ngaphandle uma kuba nezimo ezikhethekile.
Ngokulandela lokhu, uNkulunkulu uphinda achaze kubo bonke ngakho ukwamukeleka kwalokhu, bese ngalokho bephinda beyizuza impilo—ngokuba, ezikhathini ezedlule, uNkulunkulu washo ukuthi abenzi bomsebenzi ababanga nayo impilo, kodwa namuhla uNkulunkulu kungazelelwe ukhuluma “ngempilo yangaphakathi.” Kuba kuphela yilapho kukhulunywa khona ngempilo yabantu abaziyo ukuthi kusangahle kube khona impilo kaNkulunkulu ngaphakathi kubo. Ngale ndlela, uthando lukaNkulunkulu kubo luyakhula khona ngamaqophelo ambalwa, bese bona bezuza ulwazi olubanzi lothando lukaNkulunkulu olukanye nomusa Wakhe. Ngakho, emva kokubona la mazwi, bonke abantu bayasuka emaphutheni abo akuqala, babe nezinyembezi zokuzisola ngasese futhi. Ikakhulukazi, kokunye, bayanquma emiqondweni yabo ukuthi kumele bamenelise uNkulunkulu. Ngesinye isikhathi, amazwi kaNkulunkulu ayalihlaba ngokujulile ingaphakathi labantu, enze kube lukhuni ukuthi bawemukele, kube lukhuni futhi kubantu ukuthi babe nokuthula. Ngesinye isikhathi, amazwi kaNkulunkulu aba mnene abe qotho futhi, afudumeza izinhliziyo zabantu, ngendlela yokuthi emva kokuba abantu bewafundile, kusuke kufane nenkathi izinyane liphinda libona unina emva kweminyaka eminingi lilahlekile. Izinyembezi ziyagcwala emehlweni, banqotshwe yimizwa, bagqugquzeleke ukuziphonsa ekugonweni nguNkulunkulu, bebubula, bededela ubuhlungu obungachazeki obebusezinhliziyweni zabo iminyaka eminingi ukukhombisa uNkulunkulu ukwethembeka kwabo. Ngenxa yezinyanga ezimbalwa zokulingwa, kancane bayathinteka, kungathi babe nokukhathazeka okukhulu okubahluphile, njengokungabi semthethweni besembhedeni iminyaka ngeminyaka. Ukubenza banamathele ekukholweni ngamazwi kaNkulunkulu, ezikhathini eziningi uNkulunkulu ugcizelela lokhu okulandelayo: “Ukuze isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wami siqhubeke kahle nangaphandle kokuphazamiseka, ngisebenzisa amazwi acolisekile Ngilinge bonke labo abasendlini Yami” Lapha, uNkulunkulu uthi “ukulinga bonke labo abasendlini Yami”; uma efundwa ngokujulile la mazwi asho ukuthi ngenkathi abantu besebenza njengabenzi bomsebenzi, basengabantu endlini kaNkulunkulu. Phezu kwalokho, la mazwi agcizelela ubuqiniso bukaNkulunkulu ngesihloko esithi “abantu bakaNkulunkulu,” aletha ukukhululeka okuyisilinganiso esithile kubantu ezinhliziyweni zabo. Kungani-ke ngalokho uNkulunkulu eveza ephindaphinda ukuzibonakalisa Kwakhe kaningi futhi kubantu emva kokufunda kwabo amazwi Akhe, noma ngenkathi “abantu bakaNkulunkulu” besazobonakaliswa? Ngabe kungukukhombisa kuphela ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu obheka ngokujulile inhliziyo yomuntu? Lokhu yingxenye yesizathu kuphela—lapha, kusondele ekubizweni ngokubalulekile. Wenza kanjalo uNkulunkulu ukuze abantu bonke bakholwe ngokuphelele, ukuze wonke umuntu, esukela emazwini kaNkulunkulu, azi iziphambeko zakhe uqobo kanye nezono zakhe ezedlule ngokwempilo, kanye, ikakhulukazi, nokuthi kwakheke-ke isisekelo sesinyathelo esilandelayo somsebenzi. Abantu bayakwazi ukuzama ukumazi uNkulunkulu bamlandele ngokumlingisa uNkulunkulu bethathela esisekelweni solwazi lwabo. Ngenxa yala mazwi, abantu bayaguquka ekubeni ngabangemukeli nabangaphapheme babe ngabemukelayo nabaphapheme, kanti lokhu sekutshala izimpande zengxenye yesibili yomsebenzi kaNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi, ngalezi zinyathelo zomsebenzi oyisisekelo, ingxenye yesibili yomsebenzi kaNkulunkulu isiyisidingo esikhulu, idinga ukuzama okuncane nje. Ngakho, ngenkathi abantu bekhipha ukudangala ezinhliziyweni zabo beba ngababona konke kungalungile nabaphapheme, uNkulunkulu ulisebenzisa kakhulu leli thuba ukwenza ezinye izidingo zabantu Bakhe: “Amazwi Ami aphuma ethulwe noma ngasikhathi sini noma kuphi, ngakho, futhi, kumele nizazi nina uqobo ngazo zonke izikhathi ngaphambi Kwami. Okwanamuhla, ekugcineni, akufani nokwakuqala, futhi ngeke usakwazi ukuzuza noma yini oyifisayo. Esikhundleni salokho, kumele, ngaphansi kwesiqondiso samazwi Ami , ukwazi ukuwunqoba umzimba wakho, kumele usebenzise amazwi Ami njengensika, ungenzi izinto ngokunganaki.” Ngalokhu, uNkulunkulu ugcizelele ngasekuqaleni wathi “Amazwi Ami”; nangokudlule, futhi, wabhekisa kukho ethi “Amazwi Ami” ezikhathini eziningi, ngalokho, umuntu ngamunye akakwazi ukusiza kodwa umane aphendule ukunaka kwakhe akuphendulele kulokhu. Ngakho uyayiphakamisa ingqikithi yesinyathelo esilandelayo somsebenzi kaNkulunkulu: Bonke abantu bazophendukela emazwini kaNkulunkulu, bangabe besaba nalo olunye uthando. Bonke kumele bathokozele amazwi akhulunywe wumlomo kaNkulunkulu, bangadlali ngawo, bazobe ngalokho sebephelisa izimo zakuqala ebandleni, lapho umuntu oyedwa eyakuwafunda amazwi kaNkulunkulu abaningi bese bethi ameni bese beyawathobela. Ngaleso sikhathi, abantu abawazanga amazwi kaNkulunkulu, kodwa bawathatha njengesikhali sokuzivikela. Ukubuyisela lokhu emuva, uNkulunkulu wenza okusha emhlabeni, izicelo zomuntu eziphakemeyo. Ukuvimba abantu bangabi ngababona konke kungalungile nabangaphapheme emva kokubona imigomo kaNkulunkulu ephakeme nezidingo Zakhe ezinqala, uNkulunkulu uyabakhuthaza abantu kweziningi izikhathi ngokuthi: “Njengoba sekuhambe kwafika kulolu suku lwanamuhla, akumele ukhathazeke ulahle ithemba ngezenzo nenkambo yakho yakuqala. Ubukhulu nokuphana Kwami akunamkhawulo kunjengolwandle nesibhakabhaka—kungenzeka yini ukuthi izenzo nolwazi lomuntu Ngami angikwazi njengoba ngizazi Mina?” Lawa magama aqinisileyo namnene avula imiqondo yabantu kungazelelwe, masinyane akususe ukuphelelwa yithemba abayise othandweni lukaNkulunkulu, abayise ekubeni ngababona konke kulungile nabaphapheme, ngokuba uNkulunkulu ukhuluma ngokubamba ubuthaka obusezinhliziyweni zabantu. Ngaphandle kokukuqaphela lokhu, abantu bavame ukufikelwa ngamahloni ngezenzo zabo esezadlula, bese bekhathazeka bephindaphinda. Ngakho, uNkulunkulu uveza la mazwi ikakhulukazi ngokwemvelo nangokujwayelekile, ukuze abantu bangawezwa enjengaqinileyo nangenampilo amazwi Akhe, kunalokho kube anesigqi nathambile, acacile nakholakalayo.
Kusukela ekudalweni kwezinto kuze kube namuhla, uNkulunkulu uhlele zonke izinto buthule enzela umuntu esemhlabeni kamoya, akakaze alichaze kumuntu iqiniso lomhlaba kamoya. Nokho, namuhla, uNkulunkulu uchazile masinyane impi ehlomayo ngaphakathi, okushiya abantu benwaya amakhanda, kukhulise ukucabanga kwabo okushoyo ukuthi uNkulunkulu ujulile futhi akanasiphelo, kwenza futhi kube lukhuni kubo ukuthola umthombo wamazwi kaNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi isimo somhlaba kamoya esivimbezelekile siyabaletha emoyeni bonke abantu. Lena yingxenye ebalulekile yomsebenzi wesikhathi esizayo, kanti wuphawu futhi abangangena ngalo abantu emhlabeni kamoya. Kulokhu kuyabonakala ukuthi isinyathelo esilandelayo somsebenzi kaNkulunkulu ikakhulu sibhekiswe kumoya, okunhloso yawo yokuqala kungukunika abantu bonke ulwazi olukhulu ngezenzo ezingummangaliso zikaMoya kaNkulunkulu osenyameni, ngalokho sinika bonke abethembekile kuNkulunkulu ulwazi olukhulu ngobulima bukaSathane kanye nangemvelo yakhe uSathane. Nakuba bebengazalelwanga endaweni kamoya, bezwa kusengathi bambonile uSathane, kanti lapho befikelwa yilo muzwa, uNkulunkulu uguquka kungazelelwe aye kwenye indlela yokukhuluma—kuthi lapho abantu sebezuzile ngale ndlela yokucabanga, abuze uNkulunkulu: “Kungani Nginiqeqesha ngokuphuthuma okunje? Kungani Nginitshela ngamaqiniso omhlaba kamoya? Kungani nginikhumbuza ngokunigcinezela zikhathi zonke?” Nokunye—uchungechunge lwemibuzo evusa eminingi imibuzo emiqondweni yabantu: Kungani uNkulunkulu ekhuluma ngaleli zwi? Kungani ekhuluma ngezindaba zomhlaba kamoya, hhayi ngakufuna Yena ngesikhathi bakha ibandla abantu? Kungani uNkulunkulu engabhekisi ezintweni zabantu ngokuveza imimangaliso? Ngokuba nemicabango eminingana emincane, abantu bayaluthola ulwazana oluncane ngezinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu, kuthi ngalokho, nxa behlangabezana nokulingwa ngokuzayo, kubo kuzalwe okwangempela ukumenyanya uSathane. Nalapho behlangana nokuvivinywa esikhathini esizayo, basamazi uNkulunkulu futhi bamenyanya ngokujule ngokwengeziwe uSathane, bese ngalokho bemqalekisa uSathane.
Nalapho behlangabezana nokulingwa kwesikhathi esizayo, basamazi uNkulunkulu bamzonde ngokujulile uSathane, bese emqalekia uSathane ethi: “ngokuvumela izwi nezwi Lami ukuba abe yimpande aqhakaze emoyeni wakho, futhi okubaluleke kakhulu, kuthele izithelo. Kungoba lokho eNgikucelayo akukhanyi, akumbali ekhanyayo, kodwa kuyisithelo esiphisanayo—isithelo, yini okunye, okungasoze konakala.” Ezidingweni eziphindaphindekayo zikaNkulunkulu, lena ngeqondakala kakhulu kunazo zonke, yiyo eyingqikithi, ebekeka phambili ngendlela eqonde ngqo. Ngiguqukile ekusebenzeni ngobuntu obujwayelekile ngaya ebuNkulunkulwini obuphelele; ngakho, ngokudlule, emazwini Ami akhulunywe ngokuqondileyo, asibanga khona isidingo sokuthi ngengeze izincazelo ngaphezulu, kanti baningi abantu abakwazile ukuqonda okushiwo ngamazwi Ami. Umphumela kube ngukuthi, ngesikhathi sasekuqaleni, into ebeyidingeka nje kuphela ukuthi abantu bazi amazwi Ami bakwazi ukukhuluma iqiniso. Lesi sinyathelo, nokho, sehlukile kakhulu. UbuNkulunkulu Bami buyithathile indawo yonke, abushiyanga sikhala sokuthi ubuntu bubambe iqhaza. Ngakho, uma labo kubantu Bami okukhona kubo ukufisa ukuqonda iqiniso lokushiwo ngamazwi Ami, banobunzima obukhulu. Kungezinto engizishoyo kuphela lapho bethola khona ukukhanyiseleka nokucaciseleka, uma kungekhona kulo mkhakha futhi, noma yimuphi umqondo obamba injongo yamazwi Ami uliphupho elithulile. Ngenkathi bonke abantu Bami beba nolwazi olukhulu Ngami emva kokwamukela eNgikukhulumileyo kuyoba yisikhathi lapho beyoNgiphila khona, yisikhathi lapho umsebenzi Wami enyameni uyobe uphelelisiwe khona, futhi yisikhathi lapho ubuNkulunkulu Bami buyophilwa enyameni ngokugcwele. Kulesi sikhathi, bonke abantu bazozama ukuNgazi ngisenyameni, bazobe sebazi ngokweqiniso ukuthi uNkulunkulu uvela esenyameni, nokuthi lokhu kuzobe kuyisithelo. Lokhu wubufakazi obengeziwe bokuthi uNkulunkulu ukhathele ukwakha ibandla—, “nakuba izimbali endlini okutshalwe kuyo izinto eziluhlaza ziningi zilingana nezinkanyezi, ziheha bonke abavakashi, lapho sezibunile, ziba ngezidabuke njengamacebo kaSathane enkohliso, akukho namunye okhombisa ukuzifisa.” Nakuba uNkulunkulu ngoKwakhe esebenzile futhi ngenkathi kwakhiwa ibandla, ngokuthi unguNkulunkulu ohlala emusha ongagugi futhi, akanakho ukuzikhumbula izindaba esezadlula. Ukwenza abantu bayeke ukucabanga ngezinto ezidlule, ukhipha amazwi athi “ziba ngezidabuke njengamacebo kaSathane enkohliso,” okukhombisa ukuthi uNkulunkulu akazibandakanyi nomthetho omdala. Abanye abantu bangayihumusha ngokungesikho intando kaNkulunkulu, bese bebuza: Kungani, ngoba ngumsebenzi owenziwa nguNkulunkulu Uqobo, kungani ethe “lapho sezibunile, akukho namunye okhombisa ukuzifisa”? La mazwi ethula isambulo kubantu. Okubaluleke kakhulu ukuthi avumela bonke abantu babe yindawo entsha, efanelekile, yokuqala; kuyoba yikhona beyanelisa intando kaNkulunkulu. Ekugcineni, abantu bakaNkulunkulu bazokwazi ukudumisa uNkulunkulu ngokweqiniso, bengaphoqelekile, bedumisa ngendumiso evela ezinhliziyweni zabo. Yilokhu okusenhliziyweni kaNkulunkulu ngohlelo Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyi-6000. Okungukuthi, kungukubonakaliswa kohlelo lokuphatha leminyaka eyi-6000: ukwenza abantu bonke bazi ukubaluleka kukaNkulunkulu esenyameni—ukubenza bazi ngokubonakalayo uNkulunkulu eba senyameni, okungukuthi, izenzo zikaNkulunkulu esenyameni—ukuze bamphike uNkulunkulu ongacacile, bazi uNkulunkulu ongowanamhlanje, izolo, futhi, okungaphezu kwalokho, nowakusasa, ngeqiniso nangokwempela obe khona kusukela phakade kuya phakade. Yileso sikhathi-ke lapho uNkulunkulu eyothola khona ukuphumula!